အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမည်သို့လှည့်ဖြားနည်း စတိုင်ကျသောအမျိုးသားများ
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ
Alicia tomero | 20/09/2021 10:00 | စုံတွဲနှင့်လိင်
ဆွဲဆောင်မှု၏ဆောင်ပုဒ် ၎င်းသည်စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကိုဖန်တီးရန်အခက်အခဲမရှိသောလူအားလုံးအတွက်အနုပညာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုယောက်ျားများရှိသေးသည် သူတို့သည်ဤကြီးစွာသောတိုက်ကိုတွေ့ကြသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းအနုပညာသည်မမှီနိုင်သောအရာဖြစ်လာသည်။
သွေးဆောင်ဖြားယောင်းနိုင်မှုသည်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် လူတစ် ဦး ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင် ထိုအခိုက်အတန့်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းနှင့်ပရောပရည်ရှိနေခြင်းကြောင့်သူမကိုတွေ့ချင်သည်။ အသေးစိတ်အချို့ကိုသင်သိလိုလျှင်ထိုအခိုက်အတန့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသောအရာကိုသိရန်လိုသည် နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကြီးမားသောဆွဲဆောင်မှု
သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲ၊ တင်ပြချက်များမပြုလုပ်မီ၊ အသွင်အပြင်များရှိခဲ့လျှင်၊ ထိုအခိုက်အတန့်ကိုသင်ကြိုတင်မြင်နိုင်ရန်နှင့်သူမြင်နေသည်မှန်သည်ကိုမြင်စေရမည်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသွင်အပြင်နဲ့မင်းရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဒါတွေကမင်းကိုအာရုံစိုက်စေမယ့်အရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
သင့်ကိုကြည့်ကောင်းစေတဲ့ကြားနေ၊ ချော့မော့တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရွေးပါပြီးစလွယ်သွားရင်တောင် သင်ရွေးချယ်သောအ ၀ တ်များသည်သင့်အားစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းစေပြီးအမျိုးသမီးများက၎င်းကိုအလွန်အလေးထားသောကြောင့်သင် ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံကိုသတိရပါ။
သင်မထွက်ခင်ရေချိုးပါ အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆံပင်ကောင်းကိုပြုပြင်ပြီးမုတ်ဆိတ်ရှိရင်မင်းရှိရမယ် ကောင်းစွာပြုစုပျိုးထောင်သည်. ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူရေမွှေး ယောကျာ်းပီသမှုသည်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအောင်မြင်သည်။ ဤသေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်များအားလုံးနှင့်သင်သည်သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရန်ပိုယုံကြည်မှုပိုရှိစေသည်။
သင်ထိုအမျိုးသမီးကိုသင်သတိပြုမိပါကသင်စတင်လိုက်ပါပြီ ၎င်းသည်မည်သို့ပြုမူပုံ၊ ပြုမူပုံကိုကြည့်ပါမရ။ ဒီကောင်မလေးကမင်းရှိနေတာကိုသတိထားမိရင်လက္ခဏာပြတဲ့အစီအရီတွေနဲ့အခြားအရာတစ်ခုကိုပြနိုင်တယ်။
မိန်းမကမင်းကိုကြည့်ရင် အဝေးကိုကြည့်ပြီးမှမင်းကိုပြန်ကြည့်ပါသေချာတယ်သူကမင်းကိုသတိထားမိသွားပြီ။ သူကမင်းကိုပြုံးပြပြီးမင်းကိုစူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒါကအရမ်းကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေပဲ။ ထိုအကြည့်များအတွင်း၌လည်းဖြစ်နိုင်သည် သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုနှိမ့ ်၍ ဘေးသို့ကြည့်ပါသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစွာရယ်သည်။ ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်ရှိနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။
မင်းရဲ့ရှိနေခြင်းကိုလူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့အမှတ်ရစေချင်ရင်မင်းရမယ် ပြေပြစ်။ လုံခြုံသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကိုဖန်တီးပါ။ သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုမနှိမ့်ပါနှင့်၊ သင့်ပခုံးကိုကျောနှင့်ခေါင်းကိုမြင့်မြင့်ထားပါ။ သင်တစ်ခုခုသောက်လျှင်အရက်ကိုသင့်ရင်ဘတ်ရှေ့တွင်မကိုင်ပါနှင့် မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူမဘက်ကိုလှည့်စမ်းပါ.
သင်သည်ထိုအမျိုးသမီးအားသင့်ကိုယ်သင်တင်ပြရန်ရွေးချယ်ခဲ့လျှင်သင်ဖြစ်ရမည် ညှိနှိုင်းမှုလေထုဖန်တီးပါ ဒါကြောင့်သူကမင်းနဲ့ခဏစကားပြောနေဖို့ပဲ။ သင်နေကောင်းလားနှင့်သင်စတင်နိုင်သည်။ AND အဆိုးမြင်လွန်းတဲ့စာကြောင်းတွေကိုမတည်ဆောက်ပါနဲ့မရ။ မှိုများကိုချိုးဖျက်ရန်နှင့်ထိုအမျိုးသမီးအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအနုပညာကိုသင်ရှာဖွေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေသင့်သည်။ စတင်ရန် သင်၏သဘောထားသည်ကြင်နာ။ သဘာဝကျရမည်။
မင်းရဲ့ရာထူးကချစ်စရာကောင်းပြီးနူးညံ့ရမယ်ဒါကမင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရည်ညွန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ချိုမြိန်တယ်။ သင်၏အသံကိုမြှင့်ခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းခြင်း၊ အဆိုးမြင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယောက်ျားအစစ်အမှန်ကိုသူတို့မြင်ရင်ပိုကျေနပ်လိမ့်မယ် ဟာသဉာဏ်။ ဒါဟာဟာသတွေကိုအမြဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘဝမှာအရာရာကိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ရယူတာမဟုတ်ဘူး ရယ်စရာအဓိပ္ပါယ်များ
သူမသည်စကားပြောရန်ဆုံးဖြတ်သူဖြစ်လျှင် သေချာနားထောင်၊ သူကသဘောတူပြီးသူ့ရဲ့သီအိုရီအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်။ မင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြပြီးသူတို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုသူတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ရောလိုက်ပါ။ အရာအားလုံးထက်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုအလေးထားပါ သူမအားမည်သို့ကူညီရမည်ကိုစိတ်ဝင်စားပါ။
မင်းကတစ်ခြားတစ်နေရာကိုပြောင်းသွားပြီးမင်းသူမနဲ့လိုက်သွားရင်ဒါကမင်းရှိနေတာကိုသူမခံစားရတာအရမ်းချော့မော့တာပဲ။ သင်၏လက်များကိုသတိထားမိသည်။ သူမကိုထောင့်တစ်နေရာသို့လမ်းညွှန်ရန်သူမကိုလက်ဖြင့် ယူ၍ သင်၏လက်ကိုသူမ၏နောက်ကျောသို့မဟုတ်ခါးတွင်တင်ပါ၊ သူမမင်းရဲ့ထိတွေ့မှုကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက်။
ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းသို့ကြွလာသောအခါသင်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားသည်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုကိုတင်ပြသင့်တယ် စိတ်အေးလက်အေးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သက်တောင့်သက်သာအနေအထားနဲ့နေပါ၊ ရင်ဘတ်ကိုမြှောက်ပါ၊ ပခုံးတွေကိုနောက်ပြန်ထားပါ တင်းကျပ်မှုမရှိဘဲ
သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလောင်ကျွမ်းစေသောအခြားအချက်တစ်ခုမှာအချိန်အခါဖြစ်သည် လူတစ်ယောက်သည်ရိုးသားစွာပြောဆိုပြီးသူ၏စိတ်ခံစားချက်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်စေသည်မရ။ ယောက်ျားတွေကသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီရှုထောင့်ကအမျိုးသမီးတွေကိုအများကြီးဆွဲဆောင်တယ်၊ ယောက်ျားတွေကလိင်ဆန္ဒပိုမြင်ကြတယ်။
Finalmente သူမကိုဇာတ်လိုက်ဖြစ်ပါစေသူမစကားပြောချင်လျှင်သူမ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်ခွင့်ပြုပါ ဂရုတစိုက်နားထောင်ပါမရ။ မင်းကဒီစကားဝိုင်းရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်မနေနိုင်၊ အလွန်အကြူးစကားပြောတာ၊ မျှော်လင့်ချက်တချို့ကိုမပြည့်မီတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတန်ဖိုးထားလို့မရဘူး။ ရိုးသားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုသည်လက်ချင်းချိတ်သည် လူတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ယူဖို့
ဆွဲဆောင်မှုအနုပညာအကြောင်းပိုသိချင်ရင်ငါတို့ကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုသွေးဆောင်နည်း""အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကသူမ၏အရာများအားပြောပြသောအခါဘာကိုဆိုလိုသနည်း"ဒါမှမဟုတ်"အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကမင်းမျက်လုံးထဲကိုစိုက်ကြည့်တဲ့အခါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ"။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ